New Release (Mobiles) – REDPlayer
New Mobile Games release
ဒီတစ်ပတ်တော့ ဂိမ်းကောင်းလေးတစ်ချို့ပါလာတယ်ဆိုပါတော့။ One game atatime ဆိုရင်ထွက်သမျှဂိမ်းတွေ ဆော့လို့မမှီနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆော့ဖြစ်သလောက်ပေါ့။ 1. GHOSTBUSTERS WORLD Ghostbuster ကို mobile game တစ်ခုအနေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖူးလား။ တစ်ခြား console နဲ့ PC မှာတော့ game ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ဆော့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ mobile ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ AR ဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူး။ Ghostbuster world ကတော့ AR game တစ်ခုအနေနဲ့ mobile platform…
[zawgyi] Game တွေကတော့ လိုက်လို့မမှီနိုင်လောက်အောင် နေတိုင်း အသစ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ ထွက်နေတာပါပဲ။ weekly ရေးတဲ့ ထဲမှာတော့ RP ကလူတွေဆော့ဖြစ်တဲ့ ဂိမ်းအသစ်တစ်ချို့နဲ့ အတူ ကောင်းနိုးရာရာ တစ်ချို့ ကိုစုစည်းပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ တကယ့် အသစ်တွေစုစည်းပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ patch ဖြစ်ဖြစ် update အသစ်ဖြစ်ဖြစ်ထွက်တာဆိုရင်လည်း ရောပြီးတော့ ပါလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် One game atatime ကိုတော့ ခဏမေ့ထားကြတာပေါ့။ BADLAND BRAWL FROGMIND ဆိုတဲ့ F2P မထုတ်စဖူးထုတ်လိုက်တဲ့…
[zawgyi] ဒီတစ်ပတ်တော့ ပြန်ရေးဖြစ်ပြီပေါ့…စာပြန်ရေးရတာထက် ကစားရတာကိုပဲ ပိုသဘောကျလာတဲ့အခါ စာမရေးဖြစ်တဲ့ သဘောပါ… 😛 MEOWOOF ဆော့ဖူးတဲ့ ဂိမ်းတွေထဲမှာ ရင်းနှီးနေတယ်လို့ထင်ရပြီး လွယ်မယ်လို့ထင်ရတဲ့ ဂိမ်းတွေ အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။. ဒါပေမယ့် တကယ်ကစားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မသိထားတဲ့ အသစ်အသစ်တစ်ချို့ပေးနိုင်တဲ့ ဂိမ်းတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီထဲမှာ meowoof ပါမယ်ထင်တယ်။. Arcade game တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အေးဆေးပေါ့ပါ့းဆော့လို့ရပါတယ်။ သခင်ပြန်မရောက်လာတဲ့အတွက် ကြိုးချည်ခံထားရတဲ့ ခွေးနဲ့ကြောင် ၂ကောင်က အစာရှာထွက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့။ [APP STORE] CHAOS REBORN : ADVENTURES X-COM…
new mobile games release, weekly
ဒီတစ်ပတ်လောက်အတွင်းထွက်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေထဲကလွတ်သွားခဲ့ရင် ပြန်ကြည့်လိုရအောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ Player တိုင်းအတွက်တော့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ BEST RALLY Racing ဆိုတာ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း အရှိန်နဲ့မောင်းနိုင်တာမဟုတ်မှန်း ဒီဂိမ်းလေးက သေချာပြောပြပါလိမ့်မယ်။ Best Rally ရဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ အခက်အခဲ အကွေ့အကောက်တွေကို အချိန်အတိုဆုံး အရှိန်အမြန်ဆုံးကျော်ဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခြား rally game တွေနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ဟိုနားဒီနား လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေပေမယ့် ဖျက်ပစ်ရအောင်လည်း အပြစ်ရှာမတွေ့တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါပဲ။ [App Store] [APK] ISOLAND2ASHES OF TIME Point and…
New iOS & Android games, weekly
[zawgyi] ဒီတစ်ပတ် စမ်းဆော့ဖြစ်သမျှဂိမ်းတစ်ချို့ကိုစီပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချို့လွတ်သွားတာတွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ POCKET RUN POOL Zach Gage ကရေးထားတဲ့ pool arcade game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိအောင်ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ Control လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ offline mode ပါလာတာလည်းအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ [Appstore] DEPLOY & DESTROY : ASH VS ED ASH VS EVIL DEAD နဲ့ Divergent character တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ PVP FPS…
New iOS & Android game, weekly
[zawgyi] 2018 မှာ internet နဲ့ဝေးတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ အပျင်းထူပြီး မရေုးဖြစ်ကြဘူးဆိုပါတော့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဂိမ်းပဲထိုင်ဆော့ဖြစ်နေတော့ စာမရေးဖြစ်ကြတော့တာပဲ…အဟီး.. Gamer အများစုကတော့ အသစ်ထွက်သမျှ မလွတ်တမ်းဆော့ဖြစ် ကြမှာပါ။ ဒါကတော့ လွတ်သွားနိုင်မယ်ထင်တဲ့ထဲက တစ်ချို့ကိုစုစည်းပေးလိုက်တာမျိုးပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။ ODIUM TO THE CORE Badland ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆော့ရလွယ်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပါဝင်တီးခတ်ပေးထားတဲ့ သီချင်းတွေကြောင့် ဒီဂိမ်းကိုဆက်မဆော့ဖြစ်ဘူးဆိုရင် အများစုကနားလည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့အတွက်ဆိုရင်တော့ level2ကျော်တာနဲ့ ဖျက်ပစ်လိုက်ကြမယ်ထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် လှပတဲ့ graphic…
[zawgyi] ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ တစ်ချို့ game တွေလွတ်မသွားရအောင် ၅ခုလောက်တော့စုပေးလိုက်ပါတယ်။ Gamer အများစုကတော့ ဒီ ၅ခုလုံးမလွတ်တမ်းဆော့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီတစ်ပတ်က Hogwarts မှာကျောင်းတက်နေခဲ့ရတာ ၃ရက်လောက်ရှိပြီမဟုတ်လား။ တစ်ချို့ကအားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ HARRY POTTER : HOGWARTS MYSTARY Harry Potter လိုပဲ Hogwarts မှာကျောင်းတက်ချင်ရင် ဖြစ်နိုင်ပါပြီ။ ၂၅ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Harry Potter : Hogwarts Mystery မှာဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ နေရာကနေ Hogwarts ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ပါဝင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Narrative driven…
New games release iOS & Android, weekly
[zawgyi] ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဂိမ်းတွေများပါတယ်။ အချိန်မရတာနဲ့ မဆော့ဖြစ်ကြတာနဲ့ဆိုတော့ ဆော့ဖြစ်သမျှတော့ ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။ PUBG mobile Mobile ကိုရောက်တာရက်ကြာနေပြီဆိုတော့ chicken dinner ကောင်းကောင်းဆွဲပြီးကြလောက်ရောပေါ့။ PlayerUnknown’s BattleGround ကတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်း mobile game ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်မပျက်ရပါဘူး။ PC နဲ့ Xbox မှာတောင်မပါတဲ့ feature တွေထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အချက်က တစ်ခါတစ်လေ အနှေးတတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ ဆော့လို့ အဆင်မပြေတာပါပဲ။ Tencent ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒါတွေကိုပြင်ဆင်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ mobile…